Sheekada filimka Soorma: Bandhiga Diljit Dosanjh iyo qaabka sheekada Shaad Ali u dhigay ayaa cajiib ah – Filimside.net
Sheekada filimka Soorma: Bandhiga Diljit Dosanjh iyo qaabka sheekada Shaad Ali u dhigay ayaa cajiib ah
July 14, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: July 14, 2018
Filimka Soorma waxaa looga hadlaa nolosha halyeega cayaaryahankii cayaarta Hockey-ga ku caan baxay Sandeep Singh heerkii uu gaaray iyo hoos u dhacii uu la kulmay.
Jilaayaasha filimkan: Diljit Dosanjh, Taapsee Pannu, Vijay Raaz, Satish Kaushik, Kulbushan Kharbanda.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 11-daqiiqo
Qiimeynta Sheekada Filimkan: 3.5/5 (Sedex Xidig Iyo Bar)
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Soorma: Inaba caadi ma ahan bandhiga Diljit Dosanjh sida uu Sandeep Singh u matalay, qaab jiliinka adag Taapse Pannu la timid iyo qaabka sheekada Director Shaad Ali filimkan u dhigay.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Soorma: Xoogaa waxaa wanaagsaneyd in dareenada qaar ee qiirada badan in la adkeeyo, balse sida guud filimkan shaqadiisa wey hagaagsan tahay.
Fariinta Filimka Soorma Oo Kooban: Filimkan waxaa looga hadlaa soo labaashadii uu sameeyay halyeega Hindiya cayaarta Hockey-ga looga haray Sandeep Singh (Diljit Dosanjh) wuxuuna cayaarta dib ugu soo laabanaa sidii uu uu gabbar qalbigeeda u xadi lahaa.
Sandeep Singh (Diljit Dosanjh) wuxuu rabaa inuu kasbado sidoo kalena uu hantiyo qalbiga Harpreet (Taapsee Pannu) sidoo kalena ah gabbar cayaarta Hockey-ga cayaarto.
Sandeep Singh (Diljit Dosanjh) inkastoo waa horre uu cayaarta isaga fariistay hadana waa nin jaceyl waddo wuxuu si adag isugu dayaa inuu soo laabto qaranka Hindiy-na dib ugu cayaaro laakiin xanuun badan iyo caqabado badan ayuu la kulmaa laakiin waa nin jaceyl waddo inuu kufo marna dhaco waxba uma arko.
Sandeep Singh (Diljit Dosanjh) waxaa loo xulana inuu xulka Hindiya u matalo cayaaraha heerka qaran waxaana garab ku siinayaan walaalkiis Bikramjeet (Angad Bedi) oo xulka nasiib u yeelan waayay in loo xulo iyo macalinkiisa Harry (Vijay Raaz).
Balse nasiib daro shil tareen ayuu galaa kaasi oo sababaayo inuu baaralees ka noqdo ama dareemaha ka lumiyo inta ka hooseyso sinaha.
Sandeep Singh (Diljit Dosanjh) noloshiisa dad badan oo muhiim ah ayuu luminaa laakiin si adag ayuu usoo kabanaa asigoo kasoo kabanaayo dhaawacii halista ahaa dib u gaarayo guulo taariikhi ah.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Soorma: Director Shaad Ali waa ruug cadaa fanka ku xeel dheer balse dhawaanahan calankiisa dhacay bilawgii qarnigaan waxaa lagu xasuustaa inuu sameeyay filimadii hirgaleen Saathiya iyo Baunty Aur Babli balse kadib fariimahiisii badankooda wey fashilmayeen sida Jhoom Barar Jhoom, Kil Dill iyo kuwo kale.
Shaad Ali wuu soo laabtay markaana wuxuu la yimid Soorma oo uu fariin ahaan qaab wacan u dhigay wuxuuna doortay fariin waaqici ah si heer sare ahna wuu isugu daba riday xoogaa halka saac hore caajis yar ka muuqdo laakiin si dadka u fahmi karaan fariinta aadna looga helaayo ayuu u dhigay taasi oo ka dhigeyso Soorma filim dhaliishiisa ay yar tahay balse quruxdiisa sheeko ahaan badan tahay.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan bandhiga heerka sare sidoo kalena dhibka badan uu la yimid Super Star-ka reer Punjab balse Bollywood-ka sal dhiganaayo Diljit Dosanjh, weliba sida uu Sandeep Singh isaga dhigay ayuu qof walbo qalbiga kaga xaday.
Atirishada Taapsee Pannu lama buun buuniyo laakiin shaqadeeda ayaa hadasho markaana Soorma bandhig kale oo adag ayay la timid xidigtaan aflaan heer sare ah ayay marwalbo doorataa iyo doorar adag sida Pink, Naam Shabana iyo kuwo kale.
Angad Bedi iyo Vijay Raaz oo caawiyaal ka ah filimkan si wacan ayay daawadayaasha usoo jiiteen sidoo kalena waxay sare usii qaadeen xiisaha filimka Soorma.
Gunaanad: Soorma waa filim sheekadiisa wacan tahay sidoo kalena jilaayaasha qaab jiliin ahaan u hagar baxeen inkastoo hadal heyn xoogan uusan xambaarsaneyn haddana waa qasab inuu Waqooyiga Hindiya ganacsi adag ka sameeyo madaama Diljit Dosanjh uu hogaamiye ka yahay fariinta filimkana Sandeep Singh oo reer Waqooyi ah ku saabsan tahay, haddii gobolada kale Hindiya aqbalaad ka helo dadka ku nool mashruucaan si la yaab leh mid ku guuleesto ayuu noqon doonaa.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Soorma oo ay hogaamiyaal ka yihiin Diljit Dosanjh iyo Taapse Pannu:
Waxaa Aqrisay 583